Syriana mpitsoaponenana ao Torkia aho, saingy nanapakevitra ny hody an-tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2015 17:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, 日本語, Català, Ελληνικά, English
Nandany ny herintaonako latsaka tao Istanbul aho, miasa amin'ny mahampanao gazety freelance ahy sy ny fanatontosana filma. Tao aho no nihaona tamin'ny Syriana mpitsoa-ponenana maro, ka anisan'izany i Sheriff, izay nanontaniako lalana indray mandeha tao amin'ny Lalana Istikal. Lasa niara-dalana tamiko sy ny namako hiara-misotro dite izy, ary talanjona tateraka tamin'ny fanantenany sy ny idealismany aho, indrindra rehefa fantatra ny toe-draharaha sarotra iainany. Taorian'izany fihaonana voalohany izany, dia nihaona matetika izaho sy i Sheriff hifanakalo lesona teny arabo sy teny anglisy sy hiresaka politika ao Afovoany Atsinanana.
Tamin'ny 2013 aho nandray anjara tamin'ny fitokonana hitokona tsy hisakafo ho fanoherana ny fisamboran'ny antoko politika kiorda ao an-toerana, ny PYD, izay mifehy ny faritr'i Rojava, ireo mpikatroka ara-politika ao an-toerana. Tamin'ny 27 Jolay 2013 ny milisin'ny PYD, antsoina hoe YPG, no nanafika ny fihetsiketseham-panoherana ampilaminana nataonay ary namono nahafaty sivily enina, naharatra olona mihoatra ny 30 ary nisambotra olona mihoatra ny 90. Niditra an-keriny in-telo tao an-tranoko ry zareo… soa ihany fa tsy tao aho. Ka izany no nandaozako azy hankao Torkia.